रोनाल्डो नाजेरियो : ‘यस पटक फेरी ब्राजिलले विश्वकप जित्नेछ’, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
रोनाल्डो नाजेरियो : ‘यस पटक फेरी ब्राजिलले विश्वकप जित्नेछ’
एजेन्सी । ब्राजिलका विश्वकप विजेता रोनाल्डो नाजेरियोले यस पटकको विश्वकप ब्राजिलले जित्ने संभावना सबैभन्दा बढी भएको बताएका छन् ।
रोनाल्डोले भनेका छन्,“विश्वकपका छनौट हुनु आफैमा एक संभावना हो । त्यसमा पनि ब्राजिलमा यस पटक अनुभवी र उत्कृष्ट खेलाडीहरु छन् । त्यसैले ब्राजिलले यस पटकको विश्वकप उपाधि जित्छ भन्नेमा म आशावादी छु ।”
सन् २००२ मा भएको विश्वकपमा रोनाल्डोले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ब्राजिललाई पाँचौ विश्वकप उपाधि दिलाएका थिए । जसमा रोनाल्डोले फाइनलमा जर्मनीका विश्व उत्कृष्ट गोलरक्षक ओलिभर कान विरुद्ध २ गोलगर्दै सनसनी मच्चाएका थिए ।
त्यसपछि १६ वर्षयता ब्राजिल फाइनलमा पुग्न सकेको छैन् । रोनाल्डोले १६ वर्षयताको पर्खाइले अबको एक महिनामा सार्थकता पाउने धारणा राखेका छन् । रोनाल्डो विश्वकपमा सर्वाधिक गोलकर्ताको दोस्रो स्थानमा छन् ।
उनको १५ गोल रहेको छ । विश्वकपमा आफ्नो टोली ब्राजिललाई समर्थन गर्न रुस पुगेका रोनाल्डोले जर्मनी, स्पेन, अर्जेन्टिना र फ्रान्स ब्राजिलका लागि चुनौती हुने पनि बताएका छन् । तर उनी आफ्नो देशको खेल शैली अन्यभन्दा पृथक भएकाले उपाधि ब्राजिललेनै जित्नेमा विश्वस्त छन् ।
रोनाल्डो फुटबल जगतका एक महापुरुष सरह हुन् । उनले विश्वकप उपाधि, बलुन डि ओर, विश्वकपको गोल्डेन बुट, युरोपियन गोल्डेन बुट लगायत फुटबलका सबै उपाधिहरु पाइसकेका छन् ।
रिटायर्ड रोनाल्डो ब्राजिलको राष्ट्रिय टोलीबाट सर्वाधिक गोलगर्ने खेलाडीपनि हुन् । यस किर्तिमानीमा रोनाल्डो र फुटबलका पिता पेलेको समान ७७–७७ गोल रहेको छ । फुटबलको महासंग्राम रुस विश्वकप सुरु हुन अबमात्र २ दिनबाँकी छ ।